I-River Stone Cabin - I-Airbnb
I-River Stone Cabin
Cardwell, Montana, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Keith
I-River Stone Cabin iyindlu yesimanje yaseMontana ehlala eduze nomfula i-South Boulder. Ikhabethe linethezekile futhi lifudumele linezikhala ezikhanyayo zabangani nomndeni. Indawo isemaphandleni futhi izivakashi eziningi zibona izilwane zasendle ezihlukahlukene. Siyabathanda izilwane ezifuywayo futhi siyakhokha. Ikhabethe lingasebenza njengendawo ekahle yokuvakashela amapaki nezindawo ezikhangayo zasendaweni noma nje njengendawo enhle yendawo engcwele ukuze uphumule futhi ungaxhumeki.
Kunesiteshi sososo sangaphandle esimboziwe esine-propane grill kanye netafula lepikiniki uma uthanda ukupheka nokudla ngaphandle. Kukhona nendawo yokucima umlilo emaphethelweni omfula. Lena indawo enhle yokuhlala ebusuku ubukele umlilo nokugeleza komfula ngesikhathi esisodwa!
Kukhona igceke elikhulu lemidlalo nokujikijela amabhola namafrisbee. Kukhona nomdlalo we-corn hole osethelwe ukusetshenziswa izivakashi.
4.99 · 155 okushiwo abanye
I-River Stone Cabin itholakala ezintabeni ze-Tobacco Root. Cishe siyihora elingu-1 ukusuka esikhumulweni sezindiza i-Bozeman Yellowstone. Uzoba kude nemizuzu embalwa ukusuka ekuqwaleni izintaba okumnandi, ukugibela ibhayisikili lezintaba, kanye nemizila yokugibela amahhashi. Ukudoba okusezingeni lomhlaba "kuribhoni eliluhlaza" iJefferson, Madison, kanye neGallatin rivers kuseduze ekhoneni. Jabulela iziphethu ezishisayo zemvelo nomculo obukhoma e-Norris Hot Springs. I-Lewis neClark Caverns ingesinye isimangaliso sendawo! Kulabo abangathanda ukusebenzisa ikhabethe njengendawo eyisisekelo ye-adventure, i-Yellowstone NP ikude ngamahora amabili.
Kunencwadi ethi "Siyakwamukela" kuKhabhinethi eneziphakamiso zezinto okumele zenziwe endaweni. Le ncwadi ihlanganisa amabalazwe nezincwajana. Njengoba sengihlale kule ndawo iminyaka engu-20, ngingabelana nawe ngolwazi lwami lwendawo uma ufisa. Futhi, kukhona Incwadi Yokungena lapho ungabhala khona ngemisebenzi yakho kanye nokuvelayo.
Kunencwadi ethi "Siyakwamukela" kuKhabhinethi eneziphakamiso zezinto okumele zenziwe endaweni. Le ncwadi ihlanganisa amabalazwe nezincwajana. Njengoba sengihlale kule ndawo iminyak…